Tuesday January 05, 2021 - 17:20:32 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
Xukuumada Somaliland ee u gadh-wadeenka ka yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, oo xilka haysay muddo ku siman Saddex sannaadood, ayaa horumarisay kaabayaasha dhaqaalaha Somaliland. Kaddib markii ay la timi Qorshayaal lagu horumarinayo Dekedaha Somaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi iyo Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi, waxay u hagar-baxeen sidii loo tayeyn lahaa, isla markaana Qalabayn loogu samayn laha Dekeda weyn ee Berbera oo hadda noqotay Deked caalamiya, kana guurtay localnimadii.
Sidoo kale, Madaxweynaha iyo Maamulka Dekedaha Somaliland, ayaa la yimi Qorshayaal lagu dhisayo Dekedaha yar-yar ee Somaliland, maadaama oo khayr-raadka ilahay ku mannaystay Somaliland ay kamid yihiin Badda ay leedahay iyo marinka istaraatijiyadeed ee ilahay dhigay oo ah bug-cad muhiim u ah isu-socodka dunida, iyadoo Dekeda Berbera kulaalayso Marin-biyoodka Baabul-mandab oo ay sannaadkii maraan in ka badan 35-kun oo Markab.
Sidoo kale, waxa uu dhowaan soo Dhagax-dhigay Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi dhismaha Dekeda cusub ee Maydh oo laga Maalgelinayo San-duuqa horumarinta Somaliland ee loo yaqaano SDF.
Waxa kaloo ay Xukuumada Somaliland iyo Maamulka Haayada Dekeduhu ku mashquulsan yihiin Dhismaha Dekeda Saylac iyo qorshaheeda.
Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi waxa uu noqday, Maareeyihii koowaad ee ay Mahadisay Dekeda Berbera,
waxyaabo Tiro badan oo kale kusoo kordhiyey Dekeda sida nalalka Bada ee habeenkii Iftiima, iyadoo maraakibta hada habeenkii lasoo xidho. Sidoo kalena dekedu shaqayso 24 saacadoodba, nidaamka shaqaalaha iyo shaqada oo Casriya, taasina waxay fudaydisay inuu laban-laabmo ama sadex jibaarmo hananka shaqo ee dekedu u qabato Shacabka iyo ganacsatada dalka. La soco qaybaha dambe.